ဧဒင်ဥယျာဉ်..ဆီသို့(genius) | PoemsCorner
In: ကဗျာ Posted By: poem.poem28 Date: Jan 17, 2012
………. ကျန်နေမှာကို စိုးတယ်(genius)
Leave comment 10 Comments & 622 views
By: thuhtoozan at Jan 17, 2012
By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jan 17, 2012
By: May Kha at Jan 17, 2012
By: yaewintaung at Jan 17, 2012
By: ei lay at Jan 17, 2012
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 18, 2012
By: yazartun at Feb 24, 2012
အနေကြာရင်တော့ မေ့သွားမှာပါတဲ့ ဒါပေမဲ့မိန်းခလေး မှတ်ရစရာလေးတွေ မြင်ယောင်မိပြန်တော့ သတိရမိတဲ့ကိုယ့်ကို ဗွေမယူပါနဲ့ ထဝရအလင်းရောင်
By: လမင်းမောင်မောင် ဟင်္သာတ at Jul 15, 2013
ကိုယ်ဘဝကိုယ်သိ အတွေး လေးနဲ့ ဆင်ခြေပေးသူ လူအများမှာ ဤကမ္ဘာမှာ အများကြီးပါ အမြဲတမ်းပြုံး သာယာပျော်ရွှင် အေးချမ်းစေဖို့ မလွယ်ပါကွယ် လူတိုင်းလူတိုင်း အတိတ်ကိုမေ့ ဘယ်ခါသ၍ အနာဂါတ်၌ သာယာဖြောင့်ဖြူး မလွယ်ပါချေ ဤအတွက်မို့ ကြိုးစားပါဟု ဆန္ဒမေတ္တာ ပြူပါလျက်
တိတ်တခိုး၇င်ခုန်မိတဲ.နှလုံးသားထဲမှာနင်နဲ.ပတ်သက်တဲ.အ၇ာ၇ာတိုင်းကိုမြတ်နိုးစွာသိမ်းဆည်း၇င်းသူငယ်ချင်းလိုခင်ပါတယ်ဆိုတဲ.နင်.၇ဲ.ဖြူစင်မှုအတွက်တစ်ဖတ်သက်ဖြစ်ခဲ.၇တဲ.နှလုံးသားကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင်.မ၇တဲ.ဘ၀မှာဆိုင်သူမသိတဲ.အလွမ်းတွေနဲ. အဝေးတစ်နေ၇ာကကောင်မလေး (ချစ်လေး)
By: ချစ်ပို at Aug 3, 2013